Kuzadzikisa Sevhisi - Dzorerazve Kudonhedza Sarudzo - Sarudza yako Kudonhedza Mentors kweKudonhedza Kosi
Kuzadzikisa Sevhisi - Dzorerazve Kudonhedza Sarudzo
Chete ubhadhare mari yekugadzirisa, Kana iwe ukatenga kubva kuCJ, hapana mari yekugadzirisa kunyangwe!
Dzimwe nguva taiwana mibvunzo yakadai sekuti "Zvinoita here kuti utengere zvinhu kubva kumutengesi wangu uye wozvitumira mune imwe yedura rako?" Icho chingori chinoshamisa sevhisi CJ inopa - CJ kuzadzikisa sevhisi, iyo inobvumidza iwe kutumira zvigadzirwa zvako kune matura edu uye isu tinorongedza uye tinokutumira iwe. Kwese kupi zvinhu zvako zviripo, unogona kuzvitumira kumatura edu eChina, matura eUS, Germany imba yekuchengetera pamwe nedzimwe dzimba dzekudyira mhiri kwemakungwa.
Sei isu? Wadii maAmazon kana mamwe makambani ekuzadzikisa?
Pane 4 mabhenefiti makuru ekusarudza CJ kuzadzisa zvigadzirwa zvako:
1. Yakachipa mutengo uye isinganetsi, yekugadzirisa muripo chete.
2. CJ ine 8 matura pamusoro penyika, isu tinokwanisa kugadzirisa nekutumira maodha ako kuNorth America, Europe, uye Southeast Asia, zvinoreva nguva yekukurumidza uye kugutsikana kwakanyanya kubva kune vatengi vako.
3. CJ ine yayo mitsara yekutumira yakakosha kune nyika huru, CJ Packet, ayo anowanzo mhanyisa kupfuura mimwe mitsara, uye mari yekutumira kuUS inokwikwidza.
4. Kuedza-kuponesa, tsika kurongedza yakapihwa, Kuita kuti zvigadzirwa zvako zvinyanye kukwezva kune vatengi vako, zviri nyore kwazvo kuisa bhizinesi rako kubhizimisi.
Mashandisiro ekushandisa CJ kuzadzikisa sevhisi?
Sangana neShopify, Amazon, eBay, Shopee, Lazada, zvichingodaro
Otomatiki chigadzirwa chinyorwa sisitimu
Nzira mbiri dzekuzadzisa odha: manyore, otomatiki
Otomatiki enhamba dzekuteedzera dzinoenderana.
Yakawanda nzira dzekutumira
Yakawanda nzira dzekubhadhara
Gadzirisa Yako Package
Tora marogo pane zvigadzirwa zvako.
Tongedza kurongedza kwako kune ese maodha kana odhita yega neSticker, Makadhi, Bhegi.
Muchena nyora zvigadzirwa zvako.
Stock kumusoro muCJ matura pamberi
Mwedzi 6 Yemahara Yekuchengetedza Sevhisi
Taura nevatengi zvakananga
Inokodzera kumasevhisi edu ekuzadzisa nekukurumidza, sekuchengetedza, kutumira uye zvine musoro.
Maitiro akaomarara ekudzora mhando
Kuongorora zvigadzirwa zvese usati waunganidza
Kuongorora iyo odha kana uchitumira
Parizvino, isu tinongobhadharisa mari yekugadzirisa yeiri basa rekuzadzisa. Uye mutengo wacho unonzwisisika, tora matura eUS semuenzaniso, kana ukasarudza imwe yematura edu eUS kuchitoro nekuzadzisa zvigadzirwa zvako, tinobhadharisa $ 1 yezvinhu zvinorema magiramu mazana mashanu, mutengo wakaderera kana zvigadzirwa zvako zviri nyore, kana iwe sarudza stock muCJ China matura, Thailand imba yekuchengetera kana Indonesia imba yekuchengetera. Tarisa pano kune iyo mari chaiyo yebasa.